ပင်မစာမျက်နှာ United Kingdom ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကစားသမားများ Reiss နယ်လ်ဆင်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB "အကောင်းဆုံးနာမည်လူသိများသူတစ်ဦးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်Reiss"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Reiss နယ်လ်ဆင်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသင်သည်ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။
Reiss နယ်လ်ဆင်၏ဘဝနှင့်ထ။ SkySports ကိုဂုဏ်တင် အာဆင်နယ်အသင်း
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ & မိသားစုနောက်ခံ, ပညာရေး & အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း buildup စောစောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘဝ, ဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိကျော်ကြားမှုမတိုင်မီကပါဝင်ပတ်သက်, etc ကျော်ကြားမှုပုံပြင်, ကြားဆက်ဆံရေး, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ, မိသားစုအချက်အလက်များနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရန်မြင့်တက်
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကိုသူကအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့အကယ်ဒမီကနေ comeout ရှိသည်ဖို့သူတွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လူငယ်တဦးဖြစ်ပါတယ်သိတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Reiss နယ်လ်ဆင်ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့စတင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
Reiss နယ်လ်ဆင်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
ချွတ်စတင်ခြင်း, သူ့အပြည့်အဝအမည်များ Reiss လုနယ်လ်ဆင်ဖြစ်ကြသည်။ Reiss နယ်လ်ဆင်သည်သူ၏ parents- မှဒီဇင်ဘာလ 10 ၏ 1999th နေ့ရက်ဇင်ဘာဘွေဖခင်နှင့်ဆင်နှင့် Castle, အင်္ဂလန်၏ဗဟိုလန်ဒန်ဧရိယာထဲမှာအင်္ဂလိပ်မိခင်အပေါ်မွေးဖွားခဲ့သည်။
Reiss နယ်လ်ဆင်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုနောက်ခံကနေကြီးပြင်း wasnt ။ ဒါ့အပြင်သူက အဘယ်သူ၏မိဘများကသူ့ကိုဘောလုံးကွင်း မှလွဲ. ကစားစရာ၏နောက်ဆုံးပေါ် collection များကိုမတတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်ဆိတ်သငယ်၏ကြင်နာ wasnt ။
Reiss နယ်လ်ဆင် Aylesbury အိမ်ယာအတွက်ခြမ်းတစ်လျှောက်တွင်သူ့မိဘနှင့်အစ်ကိုဖြစ်သူကြီးပြင်းလာတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံကိုရင်းနှီးမြှပ်နှံအိမ်ယာကမ္ဘာဝေး (လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော) ကိုလန်ဒန် skyline လက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်သောလန်းစပြုပြီဘဏ္ဍာရေးခရိုင်ကနေဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည် Reiss နယ်လ်ဆင်ကြီးပြင်းရာ Aylesbury အိမ်ယာဖြစ်ပါတယ်။ SkySports မှအကြွေး
Reiss နယ်လ်ဆင်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
ဂိုဏ်းများနှင့်ဓါးရာဇဝတ်မှုများ၏ထောငျခြော aviod နိုင်ဖို့အတွက် Reiss မိဘများ Waterloo အနီးရှိလန်ဒန်ရေကြောင်းကျောင်းသူတို့၏သားပေးပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အစောပိုင်းပေါ်နယ်လ်ဆင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်ဦးတည်ခဲ့အများကြီးသံသယရှိဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကကျောင်းချိန်အပြီးပညာရှင်များနှင့်ကစားဘောလုံးကွင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူ-တာဝန် Multi နိုင်သူအသိဉာဏ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဖြစ်ဝေးကျောင်းမှလှုပ်ရှားမှုများသက်ဆိုင်ရာခံခဲ့ရပြီးနောက်အဖြစ်, Reiss သည်သူ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကသူ့ကိုနှင့်အတူဘောလုံးကစားစရာမလိုဘဲပြည့်စုံ wasnt ။ ဒါကအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းထက်မကအခြားလူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် Jadon Sancho- အေးဟုတ်တယ်, သငျသညျကွောငျးကိုကွား !. Sancho အဘယ်သူ၏မိဘများ Kennington ပန်းခြံအနီးရှိဂင်းနစ် Trust မှအဆောက်အဦးမှာနေထိုင်ခဲ့သူတို့ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလက်ထက် မှစ. Reiss အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့သည်။
မင်းသိလား?… ထိုသို့ Reiss နယ်လ်ဆင်နှင့်သူ၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေကဒီကွန်ကရစ်ဘောလုံးတရားရုံးများအပေါ်ခဲ့သည် Sancho ယောက်ျားလေးများအဖြစ်၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုရယူနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတသူတို့ကိုလန်ဒန် Southwark လေးတွေပြိုင်ပွဲဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ကိုမြင်တော်မူ၏။
Reiss နယ်လ်ဆင်နှင့် Jadon Sancho နှစ် ဦး စလုံးသည်ကလေးဘဝအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသည်။ SkySports ကိုဂုဏ်တင်ပါ
SkySports အရ။ လန်ဒန်တောင်ပိုင်းရှိအေးစိမ့်သောဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ယောက်ျားလေးနှစ် ဦး လုံးSancho နှင့် Reiss နယ်လ်ဆင်) ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ Amazing ဖို့ယှဉ်ပြိုင်ကစား။ ကေတီဟုမ်း-Lewis ကတစ်ဦးဘောလုံးနည်းပြများနှင့်ဆရာတစ်ချိန်ကသူကိုမွငျလြှငျအဘယျသို့အကြောင်းကိုဝန်ခံ;
"ငါအစေးတယ်အခါ, ငါသညျဤဆိ ping ရဲ့ထို့နောက်ဖြောင့်နောက်ကျောအထံတော်က volleyed သူကိုအခြားကောင်လေး (Jadon Sancho) အားတစ်ဦး 30-ခြံထို့နောက် Cross-လယ်ကိုဖြတ်သန်းမြင်တော်မူ၏။ တုံ့ပြန်မှုများတွင်ဈလျင်မြန်စွာငါ့အနှစျခုနည်းပြ, Cedric [Kobongo] နှင့် Ahmet [Akdaj] ဆှဲ, သင် telepathic နားလည်မှုသိမြင်ခဲ့ကြ '' ဟုမေးသော်, ဒါကအရူးခဲ့ !!"
Reiss Nelson နှင့် Jadon Sancho နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့အသင်းယှဉ်ပြိုင်, ကေတီဟုမ်း-Lewis ကနှစ်သက်သောအရာတစ်ဦး feat အနိုင်ရကူညီပေးနေတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
လန်ဒန် Southwark ကလေးများပြိုင်ပွဲမှာ Reiss နှင့် Sancho ။ SkySports မှအကြွေး
Reiss နယ်လ်ဆင်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
ဒေသခံဘောလုံးနှင့်အတူအောင်မြင်သောဖြစ်ခြင်း Reiss နယ်လ်ဆင် Moonshot, သူ့ဧရိယာထဲမှာဒေသခံတစ်ဦးလူငယ်အကယ်ဒမီမှာဖုန်းခေါ်ရရှိခဲ့သည်။ အဲဒီမှာနေစဉ်, သူကစပါးများက scouted တယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းအနေဖြင့်တစ်ဦးတွန်းလှန်ခေါ်ဆိုခမရောက်မှီ Reiss တစ်လစပါးမှာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတစ် Sancho လည်း Watford ထံမှဖုန်းခေါ်တယ်။
အဆိုပါစိတ်အားထက်သန် Reiss နှင့်နှစ်ဦးစလုံး Sancho ဘောလုံးများအတွက်စမ်းသပ်မှုတွေဖြတ်သန်း, နှစ်တွင် 2007 အတွက်သူတို့ကိုမြင်ခြင်းနှင့်အသီးသီးအာဆင်နယ်နှင့် Watford ၏အကယ်ဒမီ setup ကိုစစျထဲမဝငျတဲ့။ အဆိုပါအကယ်ဒမီမှာမိမိအသက်တာကိုစတင် Reiss ဘို့မလွယ်ကူခဲ့ဘူး။ အဲဒီအချိန်တုန်းကသူကသူ့အစ်ကိုခြမ်းတလျှောက် Catford မှရထားရဖို့စောစောထနိုးလိမ့်မယ်။ သူကတစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်ကိုပြု၏။
အချိန်နေရာသို့မဟုတ်ချုံးမျှအကွာအဝေး Reiss နှင့် Sancho အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုလျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားလေးများအချင်းချင်းကြည့်ရှုရန်အဘို့အသာကားဖြင့်မီးရထားနဲ့ 38 မိနစ် 52 မိနစ်ကိုယူ။ 14 ၏အသက်အရွယ်မှာမတ်လ 2015 ပတ်လည် Jadon Sancho မန်ချက်စတာစီးတီးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Reiss နယ်လ်ဆင်သူအဖြစ်အာဆင်နယ်အသင်းနှင့်အတူတိုးတက်မှုစေရန်ဆက်လက် အလွန်လျင်မြန်စွာရာထူးတက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
Reiss နယ်လ်ဆင်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - Fame ပုံပြင်မှလမ်း
အဆိုပါအကယ်ဒမီရာထူးတဆင့်တက်ပွေးအလှားသှားရငျးတော်မူပြီးမှ, Reiss အားဖြင့်သူ၏ပထမဦးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာချုပ်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည် အာဆင်နယ် မိမိအ 17th မွေးနေ့ပေါ်မှာ။ ဂိမ်းကစားခြင်းအချိန်ရရန်လေလံမှာတော့ Reiss အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြောင်းဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Jadon Sancho အဘယ်သူသည်အစောပိုင်းကဂျာမနီမှာဒေါ့မွန်အဘို့ကျန်ကြွင်းရစ်သောဂျာမန်ဘွန်ဒစ်လီဂါ၌အဘကို join ဖို့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတစ် Reiss အကြံပေးခဲ့သည်။
Reiss နယ်လ်ဆင် 1899 Hoffenheim, ဂျာမန်ပထမဦးဆုံးဌာနခွဲတစ်ခုဂျာမန်ကလပ်နှင့်အတူဆော့ကစားရန် On-ချေးငွေသွားသဖြင့်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများကိုခြေရာနောက်ကိုလိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အဘို့အဒေါ့မွန်လိုပဲ Jadon Sancho, Hoffenheim လည်း Reiss နယ်လ်ဆင်သည်သူ၏အခွက်တဆယ်တခုအဖြစ်ဖို့ပလက်ဖောင်းကိုပေး၏။
Reiss နယ်လ်ဆင်တစ်ကြိမ်ပျမ်းမျှအပေါ်တိုင်း6မိနစ်သွင်းယူ, ထိပ်7ဂိမ်းထဲမှာ 54 ရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူဥရောပမှတဆင့်အင်္ဂလိပ်သွင်းယူအဖြစ်ကျင်းပခဲ့သည်။ မဟုတ်ပင်အောက်တွင်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်အတိုင်း Raheem Sterling မဟုတ်သလိုပင် ဟယ်ရီကိန်း ကြောင်းရိုက်နှက်နိုင်ဘူး။
Fame ပုံပြင်မှ Rees နယ်လ်ဆင်လမ်း။ ခရက်ဒစ်မှ စံ
Reiss နယ်လ်ဆင်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - Fame ပုံပြင်မှထလော့
Hoffenheim မှာနယ်လ်ဆင်ရဲ့သက်ရောက်မှုသူ့ကိုအင်္ဂလန်ရဲ့ U21s ဖို့မြှင့်တင်ရေးရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာအစသတိပေးခံရ Unai Emery အဆိုပါကစားသမားများအတွက်အစောပိုင်းပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားပါရန်။ သူ possessed- သူများသည်စရိုက်များ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်, အလုပ်-မှုနှုန်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ - အရာ Hoffenheim မှာသိသာခဲ့ကြသည်ယခုအာဆင်နယ်အသင်းနှင့်အတူကောင်းစွာသူ့ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြပါပြီ။
Rees နယ်လ်ဆင် Fame ပုံပြင်မှထလော့။ SkySports မှအကြွေး
ရှိပြီးအာဆင်နယ်ပထမဦးဆုံးအသင်းကိုကိုယ်စားပြုဖို့ 844th ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သူ Reiss နယ်လ်ဆင် ပရိတ်သတ်တွေသက်သေပြတဲ့သံသယမရှိဘဲသူကလပ်ရဲ့အင်္ဂလိပ်မျိုးဆက်သစ်ရဲ့နောက်လှပသောဟူသောဂတိတော်သည်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းပင်ဖြစ်သည်.
Reiss နယ်လ်ဆင်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - relationship ဘဝ
ကျော်ကြားမှုဟာသူ့မြင့်တက်မှုနှင့်အတူအချို့အာဆင်နယ်ပရိတ်သတ်တွေဒီမေးခှနျးမေးသူ၏ဆကျဆံရေးအဆငျ့အတနျးအပျေါလုံ့လဝိရိကြရမည်ဟုဖြစ်နိုင်; ''Reiss နယ်လ်ဆင်ရဲ့ Girlfriend ကားအဘယ်သူနည်း'' ။ ဟုတ်ကဲ့ !, အဘယ်သူမျှမကစားသူ၏စတိုင်နှင့်အတူဒွန်တွဲကသူ၏ချောမောရူပ famale ပရိသတ်တွေသူ့ကိုဆွဲဆောင်မှုစေမှာမဟုတ်ဘူးလို့သောဖြစ်ရပ်မှန်များငြင်းပယ်ရှိသေး၏။
Reiss နယ်လ်ဆင်ရဲ့ Girlfriend သူကားအဘယ်သူသည်။ IG မှအကြွေး
စာအရေးအသား၏အချိန်, Reiss နယ်လ်ဆင်မှာအဖြစ် နေဆဲတစ်ခုတည်းနှင့်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပေါ်ထင်ရသောအာရုံစိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအစေးသူ့ရဲ့လက်ရှိလူနေမှုပုံစံစတဲ့ထံမှတရားစီရငျသောကြောင့် Reiss ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာသော ရောနှောဖို့အဆင်သင့်။ ငါt ကိုသူတစ်ဦးရည်းစားရှိအံ့သောငှါဖြစ်နိုင်ပေမယ့်အနည်းဆုံးအားယခုအဘို့, သူမ၏အများပြည်သူနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုလုပ်ဖို့ငြင်းဆန်။
Reiss နယ်လ်ဆင်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Reiss နယ်လ်ဆင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကိုသိရန်ရယူခြင်းသူ၏လူတစ်ဦး၏ပိုကောင်းတဲ့ရုပ်ပုံ get ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ချွတ်စတင်ခြင်းသူခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုဘောလုံး၏ကျော်ကြားမှုနေရခြင်းနှိမ့်ချဖော်ပြရန်ချစ်သောသူတစ်ဦးအေးမြကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။
Reiss နယ်လ်ဆင်ကိုယ်ပိုင်ဘဝကသိရန်ရယူခြင်း။ IG မှအကြွေး
Reiss နယ်လ်ဆင်ကွန်ကရစ်လုပ်ရပ်များသို့သူ၏အကြံအစည်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်နှင့်သူ၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန် humanly ဖြစ်နိုင်သောဘာမှလုပ်ပေးမည်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Reiss နယ်လ်ဆင်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မိသားစုဘဝ
Reiss နယ်လ်ဆင်, အင်္ဂလန်တွင်မွေးဖွားပေမယ့်နေဆဲသည်သူ၏ဇင်ဘာဘွေမြစ်များကိုတန်ဖိုးထား။ ဒါကြောင့်ပုံရသည်အဘယ်အရာကိုမှ, သူ့ဖခင်, မိခင်နှင့်အစ်ကိုဖြစ်သူ အားလုံးအများပိုင်အသိအမှတ်ပြုမှုမရှာ၏သတိရွေးချယ်မှုစေပြီ။
Reiss နယ်လ်ဆင်ရဲ့ခမညျးတျော: အနည်းငယ်သာသည်သူ၏ဇင်ဘာဘွေဖေ, မပင်သူ၏အမည်ကားအကြောင်းကိုလူသိများသည်။ သို့သော်အာဆင်နယ်က်ဘ်ဆိုက်သည်နှင့်အညီ, Reiss တစ်ချိန်ကမိမိအဖေ grounded သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အခြို့သောခရက်ဒစ်ပေးလေ၏ပေးသည်။
Reiss နယ်လ်ဆင်ရဲ့မိခင်: သူ့ရဲ့ကလေးဘဝရက်ထင်ဟပ် Reiss '' အကောင်းဆုံးအမှတ်တရများတစ်ဦးကသူ၏မိခင်စိုးရိမ်သောအရာဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသူမသူ့ကိုဝယ်ဖို့အမှန်တကယ်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာယခုအချိန်တွင်င် Therry ဟင်နရီရဲ့ သူကကျောင်း, ပါတီများနှင့်အစေးအပေါ်ကစားရန်နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဂျာစီ။ အောက်တွင်မိခင်နှင့်တစ်ဦး pasisonate ပွေ့ဖက်ရှိခြင်းသားနှစ်ဦးစလုံး၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
Reiss နယ်လ်ဆင်သည်သူ၏အမေဖ။ IG မှအကြွေး
Reiss နယ်လ်ဆင်ရဲ့မောင်နှမ: အဆိုအရ အာဆင်နယ်က်ဘ်ဆိုက်, Reiss နယ်လ်ဆင်ရဲ့အစ်ကိုကသူ့ညီဖြစ်သူကသူ့အိပ်မက်အောင်မြင်ရန်ကူညီနိုင်ရန်အတွက်မိမိအလူမှုရေးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးခြင်းတို့အတွက်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ နေဆဲအမည်မသိ (name- အမည်မသိ) ကျန်ကြွင်းသောသူ့အစ်ကိုသူယနေ့ဘယ်မှာ Reiss ရဖို့သိပ်ယဇ်ပူဇော်ကြ၏။
Reiss တစ်ဦးသောကြာနေ့ညဉ့်တွင်ပါတီများကိုသွားသည့်အခါအစဉ်အဆက်, သူ့အစ်ကိုသူတနင်္ဂနွေရဲ့အစောပိုင်းစတင်မတိုင်မီအလုံအလောက်ကြွင်းသောအရာရတဲ့ခံခဲ့ရတာသေချာပါအောင်လိမ့်မယ်။ မိမိအအစ်ကိုဖြစ်သူကိုလည်းအကယ်ဒမီပို့ချချက်နှောင်းပိုင်းနှင့်အစောပိုင်းကန်-off များအတွက်မီးရထားနှင့်ထံမှသူ့ကိုယူလိမ့်မယ်။
Reiss နယ်လ်ဆင်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - လူနေမှုပုံစံ
Reiss နယ်လ်ဆင်, အောင်သည်သူ၏ Moni ဖြုန်းနှင့်လေးရယ်အားမိမိအသက်တာကိုအသကျရှငျပျြောမှေ့သူတစ်ဦးပျော်စရာ-မေတ္တာရှင်ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ သူကတစ်ခါတစ်ရံတွင်အစားလမ်းများပေါ်တွင်သူ့ကားရှိခြင်းထက်သမုဒ္ဒရာလှိုင်းတံပိုးအပေါ်ဂျက်-မိုးကောင်းကင်စီးနင်းကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ဤသည်ကသူ၏ထူးခြားသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့တက်သေးပါဘူး။
Rees နယ်လ်ဆင်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်နဲ့။ IG မှအကြွေး
Reiss နယ်လ်ဆင်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မရေမတွက်အချက်အလက်
မိမိအအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများ: ဘေးဖယ် Jadon Sancho, Reiss Eddie နှင့်ဂျိုးနေသောသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေနှစ်ခုရှိပါတယ်။ အားလုံးယောက်ျားလေးများကသူတို့အရောင်းအအောင်မြင်ဖြစ်လာအာဆင်နယ်အကယ်ဒမီ၏ရာထူးတဆင့်ခရီးသွား။
Reiss နယ်လ်ဆင်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများကိုသိရန်ရယူခြင်း။ Eddie (လက်ဝဲ) နဲ့ဂျိုး (ညာ) ။
Religon: Reiss နယ်လ်ဆင်ရဲ့အလယ်နာမည် "လုကာ"ဟုသူကဘာသာတရားများကခရစ်ယာန်နှင့်ကက်သလစ်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ကောင်းရှိုင်းဖြစ်ပါသည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ''လုကာ'' တမန်တော်များ၏တမန်တော်များ၏စာရေးဆရာကြီးနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲတွင်တတိယခရစ်ဝင်ကျမ်း၏နာမတော်သည်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Reiss နယ်လ်ဆင်ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။